MAHALEO ny Eurocopter EC120B Colibri v1.3 X-Plane 10
Eurocopter EC120B Colibri 'P-ROP5' v1.3 Fitaovana manokana.
Ny Eurocopter EC120 Colibri (anglisy: Kôlibria) dia 5 fanaovam-panavotana, mpitovo-maotera, mpitovo lehibe Fanodina, mazava helikoptera. Miaraka natao ary mivoatra ny Eurocopter, China National Aero-Teknolojia Import & Export Corporation (CATIC), Harbin Aviation Industries (Group) Ltd (Hai) ary Singapore Technologies mpahay siansa, Ltd (STAero) ao amin'ny Eurocopter Frantsa ny Marignane toerana, ny EC120 B no nivory ny Eurocopter tany Frantsa sy Aostralia. Ao Shina, ny fiaramanidina dia novokarin'ny Harbin toy ny HC120. Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (HAMC) nanomboka mpanamboatra History of the Church-120 in 2004, ny fiangonana andalana amin'ity tanàna avaratr'i Shina no hany HC-120-dalana ivelan'i Frantsa. Shinoa PLA tafika sy ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana hividy HC-120 angidimby.
Eurocopter manana 61% liana tamin'ny tetikasa, miaraka amin'ny CATIC hividy 24% sy STAero amin'ny 15% anjara. (Widipedia)
Izany no tsara Hipoaka amin'ny endri-javatra:
- Vaovao rehetra, tena tsipiriany 3D cockpit amin'ny fanaraha-maso tanteraka animation sy ny mpanamory fiaramanidina.
- Groovy 3-D Head Up / Miala Display, amin'ny hifindra Map sy ny fiaramanidina-niainga lahatsary fakan-tsary.
- GPS pop-niakatra Asehoy ny mba hanamorana ny fiasan'ny bokotra kely eo amin'ny 3D cockpit tontolo iainana
- Araka ny marina ny tsangambato amin'ny Eurocopter VEMD (Fiara fiarakodia sy maotera marobe) X-Plane fahazoan-dalana.
- 3D mitovy ny mangarahara tontonana: ny 'transpanel' didy mahatonga ny cockpit manontolo mangarahara.
- Perforated nandroso cockpit gorodona mba hampitombo midina fahitana.
- Full napetraka ny nandrehitra textures manome zava-ambaratonga ambany, nefa legible alina-jiro simulation.
- New, unmarked Evila-Manam-pahaizana fomba loko asa --mainty rehetra tamin'ny afa-tsy ny volamena-nopetahany takela fenestron mikoriana-straighteners ....
- Very mangatsiatsiaka fandinihana fitaratra vokatry anatiny sy ivelany.
- Framerates somary tsara kokoa noho izay tratry ny fahazoana default X-Plane 747
- Ary manidina tsara tarehy koa .....
Downloads 7 083
Beat B, Propsman